Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » Smart TV dia manolotra fomba vaovao mpamokatra sarimihetsika
Manomboka amin'ity herinandro ity, LG dia manomboka mamoaka fanavaozana endri-javatra izay ahafahan'ny mpanjifa LG 2020 sy 2021 4K ary K HUD Smart TV manerana izao tontolo izao ho afaka mijery sarimihetsika sy andian-dahatsoratra ao amin'ny Prime Video amin'ny Filmmaker Mode ™, ahafahan'izy ireo mijery. traikefa amin'ny fomba nokasain'ny mpamorona votoaty.
Filmmaker Mode dia noforonin'ny HUD Alliance, ahitana mpanamboatra elektronika mpanjifa lehibe indrindra eran-tany, studio sarimihetsika sy fahitalavitra, mpaninjara votoaty ary orinasa teknolojia, mitady hiantohana ny traikefa mijery HUD tsara indrindra. Navoaka voalohany tamin'ny taona 2019 ary naseho tao amin'ny fahitalavitra LG tamin'ny taona 2020, ny Mode Filmmaker dia natao hitahiry ny fikasan'ny mpamorona votoaty hita maso, hitondra ny traikefa an-trano ho akaiky araka izay azo atao amin'ny famoahana an-tsehatra tena izy.
LG sy Amazon izao dia mandray an'io vina io amin'ny alàlan'ny atiny Prime Video misy mari-pamantarana izay manosika avy hatrany ny Filmmaker Mode amin'ny 4K sy K HUD LG TV modely mandeha amin'ny webs 5.0 sy webs 6.0. Ity fahafahan'ny fahitalavitra mifanentana ity hamantatra sy hanitsy ny toe-javatra amin'ny Mode Filmmaker nefa tsy mila ny mpijery hanova ny toe-javatra amin'ny tanana dia indostria voalohany ary manome lalana ho an'ny fahitalavitra ho avy hanohana tsara kokoa ny serivisy streaming nefa tsy mametraka dingana fanampiny amin'ny mpijery.
Na dia mety amin'ny ankamaroan'ny endrika votoaty ao anatin'izany ny fanatanjahan-tena sy ny fandaharana amin'ny fahitalavitra aza ny endri-javatra fanodinana sary toy ny fanamafisam-peo sy ny fanamafisam-peo, dia indraindray izy ireo dia afaka manao horonan-tsarimihetsika ho somary malama sy voahodina be loatra. Ny Filmmaker Mode dia mamono ho azy ireo fandrindrana fanodinana sary izay mety hahatonga ny sarimihetsika ho somary tsy voajanahary ary mahatonga azy ireo hampiseho amin'ny fomba hafa amin'ny fomba tian'ny talen'izy ireo ary mitazona ihany koa ny tahan'ny lafiny voalohany, ny loko ary ny tahan'ny sary ho an'ny traikefa tena izy. Miaraka amin'ny mainty lalina indrindra, ny fifanoherana mihatsara ary ny loko marevaka amin'ny fahitalavitra mandroso an'i Leg, ny mpijery dia hahatsapa ny halalin'ny tsy manam-paharoa sy ny zava-misy amin'ny alàlan'ny sarimihetsika sy andian-dahatsoratra marobe an'ny Prime Video, anisan'izany ny Amazon Originals toy ny The Marvelous Mrs. Mussel, The Boys, The Tomorrow War sy ny andian-dahatsoratra ho avy tena andrasan'ny The Wheel of Time amin'ny 19 Novambra.
Ho fanampin'ny kalitaon'ny sary kintana, ny fahitalavitra HUD an'ny Leg ao anatin'izany ny filaharan'ny fahitalavitra OILED mahavariana, dia mirehareha amin'ny endri-javatra maro izay manatsara kokoa ny traikefa fijerena sinema. Ny Dolby Vision™ IQ dia manitsy amim-pahakingana ny firafitry ny sary mifototra amin'ny karazana votoaty sy ny toe-pahazavan'ny tontolo iainana, ka miteraka kalitaon'ny sary tsara indrindra ho an'ny sarimihetsika sy ny tontolo rehetra. Ho an'ny feo tsara kokoa, Dolby Atoms® dia manome alalana amin'ny antsipirihany ny manodidina ny habakabaka izay manampy amin'ny famafazana ny mpijery amin'izay rehetra tazan'izy ireo.